Michelle Rodriguez - photosession "Maxim"
Ny kintan'ny filma "Avatar" sy "Fast and the Furious", ilay tovovavy nanohanana ny lazan'ny mpikomy sy ny voadaroka tao Hollywood, dia vitsy ny sary ahafahana mahita ny fihavanana sy ny hatsaram-panahin'ny vehivavy. Saingy noho ny sary fitifirana ny gazetiboky "Maxim" malaza i Michelle Rodriguez talohan'ny nahitan'ny tafiky ny mpankafy maro tamin'ny hazavana hafa tanteraka.
Mendri-piderana Michelle Rodriguez ao amin'ny sary fitifirana an'i "Maxim"
Ny vintana tsy manam-paharoa mahita an'i Michelle kely dia tsy amin'ny fanamiana ara-miaramila, miaraka amin'ny hozatry ny hatsiaka sy ny fanamiana feno, fa amin'ny fitafiana tsotra, pataloha mahazatra. Mahavariana fa tena tsara tarehy ilay mpilalao sarimihetsika, mety tsy dia mahazatra loatra amin'ny endriny. Raha ny zava-drehetra, ny andraikiny dia ny anjara asan'ny maingoka masculine sy mahery, izay, indrisy fa na tsia, fa manavaka ny tena toetran'ilay kintana.
Tsy dia ilaina loatra ny manamarika fa tsy manana laza tsara mihitsy ilay tovovavy: nosamborina ilay mpilalao sarimihetsika nandritra ny fisotroan-dronono ary nanandrana nandresy ny mpiara-monina taminy.
Miverina amin'ny lohahevitry ny sarin'i Michelle Rodriguez ao Maxim ary ny sariny vaovao, ilaina ny manamarika fa tsy ela akory izay, tamin'ny filma ofisialin'ny horonantsary "Fast and the Furious-7" tao Los Angeles, dia nanafay ny mpiara-miasa rehetra tamin'ny asam-barotra ilay tovovavy, miseho eo anoloan'ny mpanatrika ao amin'ny akanjo rad-draketa , miloko marevaka avy any Vivienne Westwood.
Raha mijery ireo sary ireo dia manjavozavo izao tontolo izao: nahoana ny vehivavy tsara tarehy no manafina ny endriny mahavariana, ny làlan-koditra mampihetsi-po, ny fivalanan-damba vehivavy eo ambany, hazavao, akanjo fitafiana?
Ny fiainan'ny tena manokana Kristanna Loken
Vin Diesel dia nanangona mpanjohy 100 tapitrisa tao amin'ny Facebook
Charlize Theron no olo-malaza tao anatin'ilay sarimihetsika "Fast and Furious 8"
Na dia eo aza ny endriky ny anjely ny kintana, dia ho an'ny "Maxim" kosa dia tsy nametraka ny antsasak'izany, toy ireo olo-malaza maro. Na izany aza, ao amin'ny Internet, afaka mahita sary maro an'i Michel ianao amin'ny fomba "hentitra", mety ho tafiditra ao amin'ny tambajotra noho ny toetran'i Drégie de Rodriguez.
Ny sary bevohoka dia mamono an'i Demi Moore
Mankanesa ao anaty kiraro
Nina Dobrev tao anaty kiraro
Akanjo marevaka toy ny Xenia Borodina
Tattoos an'i Selena Gomez
Sakay miaraka amin'ny gelatine
Famantarana ny VIH amin'ny vehivavy
Kitapo misy vary
Amin'ny inona no manao akanjo fotsy?
Marmalade miaraka amin'ny mulberry sy ny serizy
Famaritana ny tranonjaza miaraka amin'ny appendages
Fortune-milaza ny andro fampakaram-bady
Pikamilon - famantarana ny fampiasana
Miatrika biriky seramika
Fitomboana sy mari-pamantarana hafa avy amin'i Matt Damon
Mandeha amin'ny maraina ho an'ny mpandray anjara - fandaharam-potoana
Karazana sy andraikitry ny fifandraisana
"Mijery ny varavarankely"